Maaddaama aan ahay qof jecel cayaaraha dibadda, waxaan kula talinayaa qalabkan qof walba! - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Warka Warshadaha > Maaddaama aan ahay qof jecel cayaaraha dibadda, waxaan kula talinayaa qalabkan qof walba!
Maaddaama aan ahay qof jecel cayaaraha dibadda, waxaan kula talinayaa qalabkan qof walba!
Boorso maqaar weyn oo si wanaagsan loo dhisay oo loogu talagalay keydinta iyo abaabulka alaabada kalluumeysiga aasaasiga ah. Waxay qabsan kartaa 100 qabanqaabiye, ama waxay u baneyn kartaa meel ay ku kaydiso galoofyada, xirmooyinka, iwm. Laba jeeb oo dhinac ah ayaa qaban kara aalado badan oo shaqeynaya, mindi iyo cabir cajalad Jeebka dambe ee fidsan ayaa hanan kara jaantusyo iyo shatiyo. Jeebka hore wuxuu hayaa aalado dhaadheer, sida mindiyo guntin. Jiinyeerku wuxuu umuuqdaa mid sifiican loo sameeyay wuxuuna qaban karaa gacanta, salkana uma muuqdo inuu yahay mid siman si looga fogaado inuu ku siibto sagxadda.
Dambiisha Taakulaynta Kalluumaysiga Calamus - Dambiisha Kalluumeysiga ee Biyaha Cusbada ama Kalluumaysiga - Rip-Stop PE - Garabka Garabka La Faafiyey
· Astaamaha Muhiimka ah â € “Boorsada lagu keydiyo wax lagu kalluumeysto Calamus Kalmus waxay keydisaa ilaa (4) 3600 & (1) 3500 oo cabbir ah oo sanaadiiqda kalluumeysiga ah oo ay ku jiraan taakulayn, kalluumeysi, iyo qalab kalluumeysi - Adag, biyo u adkaysta, muddo dheerna wata 600D Jooji maaddada Polyester - 7 jeebadaha keydinta gudaha iyo dibedda ee kalluumeysiga - suunka boorsada garbaha oo duuban oo xamili raaxada - â Qiyaasta cabirka bacda oo si buuxda loo ballaariyay oo ay ku jiraan jeebadaha 14.3â € x 9â € x 7.5â €
· Adag iyo Biyo adkaysi â € “Bacaha taakulada Calamus waxaa laga sameeyaa maaddo adag oo 600D ah oo ka sameysan diillin-joojin. Mashiinno isku dhafan oo waara oo bixiya waxqabad muddo-dheer iyo isku halayn aan caadi ahayn. Lakabka gudaha ee PVC wuxuu bixiyaa difaac si loo hubiyo in kalluumeysigaaga kalluunka laga ilaaliyo waxyaalaha jira xitaa bacda wax looga qabto biyaha cusbada. 600D PED-ga PVC ee daaha leh ee dahaarka leh ayaa diidaya qoyaanka oo cagaha caagga ah ee taabashada ah waxay qabanayaan dusha sare si aysan bacdu ugu dhex wareegin doontaada dhexdeeda.
· Way fududahay in la abaabulo â bag “Boorsada ay la soo taagaan Calamus waxay ku habboon tahay daabulidda qalab kalluumeysi oo kala duwan. Qaybta ugu weyn waxay haysaa ilaa (4) 3600 cabbir saxan oo wax lagu qaado (aan lagu darin) jeebka horena wuu hayaa (1) 3500 cabbirka cabbirka. Shan jeebadaha bannaanka ka ah iyo waraaqo sibiibix ah ayaa bixiya meel lagu keydiyo alaabada yaryar sida jawaannada sedka, taakulada terminalka, qalabka, qalabka roobka, taleefanka gacanta, boorsada jeebka, ama waxyaabo kale.
· Naqshadeynta Waxqabadka - Loogu talagalay shaqeynta, nidaamyada xirxirayaasha xirmooyinka-bungee ee la hagaajin karo waxay si dhakhso leh, marin u fududaan ugu helayaan sed-jilic jilicsan, qalabka roobka, ama qalab. Labada daraf ee boorsada waxaa ku qalabaysan jeebado mesh oo jilicsan oo bixinaya keyd badan oo kalluumeysiga lagu kaydiyo oo lagu buufiyo, xariiq ama sed. Siibbiyadeena isbarbar yaacaya iyo wareejinta loop way fududahay in la helo oo la isticmaalo.
Raaxada iyo Kaydinta â € “Suumanka garabka naga duuban iyo gacmaheena waxay siinayaan raaxo dheeri ah culeyska xad dhaafka ah. Bacaha taakulada Calamus waa kuwo raaxo leh in la qaado, fudud oo la kaydiyo, oo ugu fiican qiimaha fasalka! Ku rar xashiishkaaga santuuqa taakulada leh jileecyo jilicsan, kalluumeysi, kalluumeysiyo jilicsan, jibbaallo, qabatooyin, culeysyo, taakal terminal iyo rigs
Ma jiraa qof u adeegsada boorsadan kabaha ka baxsan wadada iyo qalabka? Waxaan dhigaa kabaha barafka, koofiyad, laba nooc oo muraayadaha indhaha ah, galoofyo, suufooyin jilibka ah, surwaal baraf, suudhka barafka iyo xoogaa yar oo wajiga lagu xiro ah oo igu filan.
Boorsada Unkiar Ski Boot, 50L Ski Boot Boorsada Safarka ee Koofiyadaha Kabaha, Muraayadaha indhaha, galoofyada, skis, barafka & Qalabka
· 50L Kaydinta AWOODDA: Bacda 'Unigear boot boot boot' waxaa ku jira nashqad feker leh, oo waddo dheer u mari karta sameynta rajada ah in qalabkaaga geesaha la gaadhsiiyo sida ugu fudud ee aan walbahaarka lahayn. Haysashada 50 litir oo ah kaydinta kaydka, wey weyn tahay in la keydiyo kabaha, koofiyadaha, muraayadaha indhaha, dharka, waxyaabaha qiimaha leh, iyo waxyaabo kale oo badan. Haddii aad haysato qalab badan oo aad ku kaydiso oo aad ku safarto, boorsadani waxay hubaal tahay in shaqada la qabanayo.
· ISBARBASHALKA QOFKA: Boorsadan boorsada lagu rito ee boot-ka waxay ku siin doontaa difaaca ugu dambeeya ee qalabkaaga. Cabirkeedu waa 11.8 x 12.6 x 19.7 inji, waxayna awood u leedahay inay keydiso kabaha ragga ee Mareykanka ilaa cabirka 12.5. Saddex qaybood oo shaqsi ah iyo jeebab qaar ayaa qalabkaaga ka dhignaan doona mid abaabulan. Si fudud ugu dheji barafka iyo sabuuradda adoo isticmaalaya webbing dibedda laga hagaajin karo. Way fududahay inaad kabaha ku beddesho meel kasta oo aad cagahaaga ku qalajiso adoo hoos u dhigaya albaabka gadaal gadaashiisa si aad ugu adeegsato sariir taagan.
· BIYAHA OO LAGU WAADI KARO: Dharka bannaanka oo xoog leh ayaa isticmaala isku-darka tarpaulin iyo naylon 1050D ah, taas oo siinaysa boorsada buudka lagu raaco ee lagu dhejiyo ee lagu rakibo oo lagu ilaaliyo tayada aan biyaha lahayn ee ka dhigaysa inay ku sii noolaato muddo dheer. Boorsada boorsada bootka ee sifiican loo duubay waxay ilaalin kartaa walxahaaga jilicsan. Bacda sagxaddeeda waxaa si buuxda ugu dhegsan tarpaulin u diirran biyaha iyo heerkulka hooseeya, wax walwal ah oo ku saabsan barafku ma dhex mari doonaan
· QAABKA SAFARKA DIB U DHAXAYSAN: Haysashada shaashadda dhabarka mesh ee loo yaqaan 'EVA padded mesh dhabarka', waxay ka ilaalin kartaa kabaha inay dhabarka kaa jabsadaan. Suumanka boorsada lagu xirxiray ee leh nidaamka la hagaajin karo waligood garbaha ha marinin waxayna maamushaa in lagu dhajiyo dhabarkaaga iyada oo aan loo eegin inta aad ku dhaqdhaqaaqi karto, taas oo u oggolaaneysa boorsada barafka lagu riixo in laga qaado meel ilaa meel fudeyd guud ah.
· 365 MAALMOOD 100% QANACSAN: Boorsada boorsada lagu qaato ee loo yaqaan 'Ski Boot Bag Backpack' waxay fududeyneysaa qaadashada kabaha culeyska culus iyo kabaha kale ee barafka lagu ilaaliyo, iyaga oo ka ilaalinaya safarka, xitaa gaariga. Haddii aadan 100% ku qanacsaneyn sheygan sabab kasta ha noqotee, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha waxaan isla markiiba kaa caawin doonnaa inaad xalliso dhibaatada.
Hore:Boorsada Safarka ugufiican 2021